« Secours populaire » avokoa ny tombony azon’izy ireo tamin’ilay fampisehoany farany. Notanterahina ny alarobia 12 febroary lasa teo moa izany, tao Toulouse. Vola mitentina 500.000 euros izany no natolotr’izy ireo ity fikambanana ity ary mbola narahin’izy ireo fanentanana izany ka nentin’izy ireo nilaza fa raha tsy manana vola omena ny tsirairay dia afaka manolotra fotoana ho an’ny zavatra iray tena masaka ao am-pony.
Elton john : Nampiato ny fampisehoany fa narary
Niezaka ihany ilay mpihira Elton John ny hanohy ny fampisehoana natolony hatramin’ny farany, saingy noho ny fahasalamany dia tsy vitany intsony izany. nikiry mafy ny hihira mihitsy mantsy izy, ny alahady 16 febroary lasa teo, tao amin’ny kianja Mount Smart d’Auckland any Nouvelle –Zélande. Mialohan’ny hijanonany tanteraka dia naatony aloha ny fampisehoana. Nanazava tamin’ireo mpijery sy mpankafy izy fa voan’ny aretin-tratra « pneumonie » ka haka aina kely aloha. Rehefa tapitra nefa ny hira roa taorian’ny niverenany niakatra an-tsehatra dia niato tanteraka i Elton John. Tsy afaka mihira aho hoy izy, tsy misy feo intsony ka tsy maintsy andeha. Niala-tsiny izy ary niala teo an-tsehatra. Tsy nisy moa ny nanome tsiny azy fa niaiky ny fahaizany nifehy izany aza ny praiminisitra tao an-toerana, Jacinda Ardern.